Fandaharanasa Fihariana: fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Fambolena | NewsMada
Fandaharanasa Fihariana: fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Fambolena
Mitohy ny fanatanterahana ny fandaharanasa Fihariana. Saika misehatra amin’ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamaroan’ireo tetikasa voaray, manerana ny Nosy, toy ny fiompiana akoho fakana nofo, ohatra.
Natao sonia, omaly, ny fifanarahana roa sosona eo amin’ny Fandaharanasa Fihariana, andaniny, sy ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep) sy ny minisiteran’ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana (Mica), ankilany.
Hanatanterahana ny « Tetikasa Akohonaka » ny voalohany, hampiroboroboana ny fiompiana akoho eto amintsika, novolavolain’ny tanora voafantina ao amin’ny Fandaharanasa Fihariana. Mifantoka amin’ny hananganana ny biraon’ny Fihariana any amin’ireo antenimieran’ny Varotra sy ny indostria miisa 23 manerana an’i Madagasikara kosa ny faharoa. Eo koa ny fanaovana atrikasa hifampizarana traikefa amin’ny mpandraharaha madinika any ifotony, amin’ny lafiny famoronana asa, ny fananganana orinasa, ny fitantanana, sns.
Akoho 144 000 afaka telo volana
Nilaza ny minisitry ny Maep, Ranarivelo Lucien, fa « tafiditra ao anatin’ny paikady hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ny « Tetikasa Akohonaka » sady hampirisihana ny Malagasy hihinana sakafo misy otrikaina, toy ny proteina, ohatra ».
Ho an-dRtoa Zafindravaka Valérie, sekretera mpanatanteraka ny Fihariana, « tanjona ny hanampiana orinasa misehatra amin’ny fiompiana akoho miisa 500 isanisany. Mahatratra 72 ny orinasa efa nahazo fanampiana avy amin’ny Fihariana, hamokatra akoho maherin’ny 144 000 afaka 60 andro ».
Ho an’ny orinasa madinika sy vaventy
Ho an’ny minisitry ny Mica, Rtoa Rakotomalala Lantosoa, hisitraka amin’ny fiaraha-miasa amin’ny Fandaharanasa Fihariana avokoa ny orinasa na ny mpandraharaha madinika, salantsalany ary vaventy, hatramin’ny orinasam-pianakaviana aza. Hahazo tombontsoa koa na aiza na aiza misy azy ireny manerana an’i Madagasikara, na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra. Azo atao tsara ny misoratra anarana any amin’ireo foiben’ny antenimieran’ny Varotra sy ny indostria miisa 23 eto amin’ny Nosy, na miditra ao amin’ny tranonkala www.fihariana.com.